Uluqhuba kanjani uvavanyo lwe-A / B ngokutshintsha kwakhona? Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 13, 2015 Douglas Karr
Iqela elivela Guqula kwakhona, Isixhobo se uvavanyo lwe-b, wasinika olu hambo lwendlela yokuseta ukuhamba komsebenzi ukulungiselela uvavanyo lwe-b oluchanekileyo noluthembekileyo.
Yintoni uvavanyo lwe-A / B?
Kwaziwa njenge ukwahlula uvavanyo, a / b kuvavanyo kubhekisa kwiinguqulelo ezimbini zephepha lewebhu okanye usetyenziso-uguqulelo A kunye nohlobo B. Amaqonga ovavanyo A / B avumela abathengisi ukuba bafake ikhowudi kwiphepha labo kwaye baphuhlise iinguqulelo ezimbini kwiqonga lokuvavanya le-A / B. Iqonga lokuvavanya i-A / B liqinisekisa ukuba umahluko ngamnye uboniswa kwindwendwe kwaye kubahlalutyi kubonelelwa ngowuphi owenze ngcono. Ngokwesiqhelo, intsebenzo ibotshelelwe kunqakrazo olwenziwayo xa kubizwa isenzo.
Inkqubo yokumisela uvavanyo lwe-A / B
Yenza i-hypotheses - Brainstorm uluhlu lwe-15 lwee-hypotheses zezinto ezingakulungelanga kwiwebhusayithi yakho, zeziphi izixabiso zexabiso ezingacacanga, kwaye zeziphi iindlela zokubiza izinto ezingacacanga. Babeka phambili ngokubaluleka kwinguqu yakho kunye nexesha elifunekayo lokumilisela. Khetha uvavanyo oluya kuthi lube nefuthe kuguqulo kwaye ludinga ixesha elincinci lokuphumeza.
Cwangcisa iinjongo zovavanyo -Lonke uvavanyo kufuneka lukhulise i-metric ethile yewebhu yakho. Umzekelo, ukuba unendawo yokufika- utshintsho kufuneka luchaphazele ukungena / / iqhosha loku-odola.
Yenza umahluko -Ukuba ukhethe i-hypothesis ongathanda ukuyitshintsha kunye nokuseka iinjongo ezinokulandeleka-ukumilisela umahluko. Elona nyathelo libalulekileyo lelo nyathelo kukwenza utshintsho olunye kuphela ngokwahluka. Ukuba utshintshe isihloko sephepha lewebhu, musa ukutshintsha umbala weqhosha, kuba kuya kuba nzima ukutolika iziphumo zovavanyo. Nika umyili kunye nomphuhlisi umsebenzi ukulungiselela umahluko.
Qalisa uvavanyo Ngokwesiqhelo, oku kuyenziwa ngokuncamathisela ikhowudi kuvavanyo lwakho lwe-A / B kwinkqubo yolawulo lomxholo kunye nokwenza uvavanyo. Qiniseka ukuba uvavanya iphepha lakho ukuqinisekisa ukuba uvavanyo lushicilelwe njengoko kuvavanyiwe.
Qaphela uvavanyo ngaphezulu kwexesha okanye inani lotyelelo apho uqinisekisiwe khona ukuba ngowokugqibela kubahlalutyi iya kuvakala ngokwezibalo. Iiveki ezimbini ziphezulu kumgangatho wesiza esineenguqulelo ezili-100 ngosuku. Ukuba ufumana uguquko oluncinci, uya kufuna ukulinda ixesha elide.
Khetha ophumeleleyo ngokusekwe kwiziphumo ezisemthethweni. Awazi ukuba yeyiphi na ingxelo esebenzayo? Sebenzisa i- Uvavanyo lokuBaluleka kwe-A / B ukusuka kwi-KISSmetrics.
Faka iinguqu eziphumeleleyo kwindawo yakho. Susa ikhowudi yokuvavanya i-A / B kwaye ubeke endaweni yayo ngokuphumelela okwahlukileyo kovavanyo lwe-A / B.
Qalela ekuqaleni ku # 1 ukucacisa ngakumbi iziphumo okanye ukuqala olunye uvavanyo.
Uvavanyo lwe-A / B yinkqubo engenasiphelo; Kuya kufuneka ukonyuse amaxabiso akho okuguqula ama-3 ukuya kuma-5 kuvavanyo olwahlukileyo. Ayizizo zonke iimvavanyo eziza kuphumelela kodwa xa zikhona, yindlela entle yokwandisa ukusebenza kwendawo yakho.
Malunga neQonga lokuVavanya i-A / B kwakhona
I-ChangeAgain ibonelela ngeqonga elinamaxabiso ngenani leemvavanyo onazo kwaye elingasekelwanga kwimbonakalo yendawo yakho-iluncedo kakhulu kuba iisayithi ezinkulu zevolumu zinokubiza kakhulu ukuvavanya. Banazo nezinye Iimpawu ezahlukileyo, njengobuchule bokuvumelanisa iinjongo kunye neGoogle Analytics kunye nomhleli obonwayo ongadingi amava okubhala.
tags: vavanyotshintsha kwakhonai-google analyticsIinjongo zohlalutyo lukaGoogleUvavanyo lwe-google analyticsyintoni uvavanyo